August 8, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 8
GALKACYO(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kulan gaar ah uu uga socda aqalka madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karash iyo qaar kamid ah xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doorto gobalada Sool, Sanaag iyo Cayn.
Kulankan oo ah casho sharaf madaxtooyada loogu sameeyey xubnaha ka socda Puntland ayaa madaxweyne Farmaajo uu kala hadlayaa xaalada siyasaadeed ee dalka, halka madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo xildhibaanadu ay iska xog waraysan doonaan xaalada deegaanada ay kasoo jeedaan.
Qorshayaasha laga wada hadlayo ayaa waxaa kamid ah ka hirgelinta deegaanada SSC mashaariicda dowladda iyo baahinta hanaanka shaqo ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana kulanka dib madaxweyne ku xigeenka uu kulamo gaar gaar ah la qaadan doonaa xildhibaanada iyo wasiirada kasoo jeeda Puntland oo uu kala hadli doono qorshayaasha horyaala.
Binti-Girl.. been & khiyaamo badanaa, maalin dhawayd waxay lahayd Farmaajo ma arki karo Villa Wardhiiglay tegi maayo wakhtigiisii waa dhamaaday waa in uu meesha ka tagaa , hadana hoosta ayay kaga jirtaa… kkkkkkkkkk
SIYAASADA IYO TALADA SSC WAA INAY XOR KA AHAATO TAN BEESHA MAJEERTEEN SI LA MIDA TAN OGAADEEN IYO MAREEXAAN HADII KALE GUUL DARO JOOGTO AH BAAD DARIS LA AHAANAYSAAN..
Jaalle, haddii aad dad dhan talo u soo jeedinayso, marka hore ka sii baaraandeg oo adigu ruug bal in ay cuntamayso oo ay u qalanto in ay maankaaga soo dhaafto.
Waa marka hore ee SSC waa gobollo iyo degmo magacyadood ee beel mise beelo ma aha. Sool iyo Cayn beesha Dhulbahante ayaa u badan, waa se lala wadaagaa oo Fiqishinni oo Hawiye ah ayaa xataa le deggan. Sanaag Bari waxaa u badan Maxamuud Harti oo ah labada walaalo ee Warsangali iyo Hinjiiye. Harti kale iyo reer Ogaadeen ahina way ku la wadaagaan. Nasiib darro, Dhulbahantuhu Sool iyo Cayn ayay isu kala faquuqeen oo talo ay wadaagaan waa hore ayaa ugu dambeysay. Inina maamulka jabhadda SNM ayay is ka xaraashtay oo inina qawsaarkii Cali Khaliif baa laqmiyay. Inina Xamar ayay afka u kala haysaa.
Sanaag Hartiga deggani taladoodu waxay fadhidaa dagalkooda Puntland ee ay siyaasad iyo geyi ahaan ba uga tirsan yihiin. Markaasi, talada SSC ee aad ku hadaaqday ina ayaheed? Xaggee bay ka jirtaa? Maxaa se Majeerteen iyo Mareexaan iyo Ogaadeen sheekada ku soo daray? Haddii se aad Dhulbahantaha ku la talisay in ay kuwa ay dhiig iyo dhul ba dad isugu xigaan talada ka goostaan, sow guul darro tii ugu xumayd maad badin?
Armay kuu sharaf dhaantaa in aad Daaroodka shu’uumahooda ka dhex baxdo oo aad cidda ku khuseeysa danaheeda ka hadashaa oo magaceedana si raganimo lagu dheehay u soo huwataa?
Thank you Boodhari.
Waa inay debo qoodhi u noqodaan Isaaq iyo Marexaan
War ama wax murti iyo xikmad ku dhisan soo qoro ,oo santuuqa qabyaalada jaahiliga ah ka baxa,oo ka xorooba.
Halkii uun baad taagantihiin mudo badan,dhaliil wax dhisaysa waa loo baahanyahay balse mida wax duminsysa ma fiicna.
Ra’yigiina xitaa hadii uu anshaxa iyo sharafta mid ka baxsanyahay yahay xor baad u tihiin waa xoriyada hadalka oo mid xun iyo mid fiicn ba leh.
Boodhari, Kaligaa Ma Aha, Reer Tolkaa Oo Dhan Baa Xanuun Dhulbahante Qabo,
Car Pintiland Difaacda Majeedheenoow
Oo ma Dhulbahantaa Majeeteen Puntalnd kadifaacaan? Cid kale oo Cadow ku ah majiraane, yacni hadday iyagu, was Dhulbahantee naftooda cadow kuyihiin umadda ka agdhowna waa kunoqonayaane?